७३ वर्षका इजरायली नागरिकले फुटबलमा राखे नयाँ कीर्तिमान ! - Everest Dainik - News from Nepal
७३ वर्षका इजरायली नागरिकले फुटबलमा राखे नयाँ कीर्तिमान !
एजेन्सी । एक इजरायली नागरिकले ७३ वर्षको उमेरमा फुटबल खेलेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका छन् । इसाक हायिक नामका एक वृद्धले शुक्रबार इजरेली क्लब इरोनी ओर येहुदाबाट गोलरक्षक बनेर फुटबल खेलेका हुन् । उनले आफू वृद्धावस्थामा भए पनि खेलका लागि तयार रहेको बताएका थिए । उनले ९० मिनेट पुरै खेल खेलेका थिए ।
खेल सकिएपछि उनलाई गिनिज वल्र्ड रेकर्ड्सले पुरस्कार पनि प्रदान गरेको थियो । उनको टिम ५–१ गोलले पराजित भए पनि उनले निकै राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए । उनले आफ्नो प्रदर्शनलाई इजरायलको गौरवको विषय भएको प्रतिक्रिया दिएको समाचार संस्था रोयटर्सलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ ।
ट्याग्स: isak hayek, isrial